Madaxweynaha Soomaaliya oo Barlamaanka la dardaarmay+Sawirro – Ogadentoday Press- Ogaden News, Ethiopia and Somalia
Madaxweynaha Soomaaliya oo Barlamaanka la dardaarmay+Sawirro
Written by admin, Apr 11, 2016, 0 Comments	0
Follow April 11 (Jowhar)— Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta si rasmi ah magaalada Muqdisho uga furay Kalfadhigii 8-aad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa ugu horeyn ugu hambalyeeyay guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaannada, hawshii wanaagsanayd ee ay qabteen muddada afarta sanno ku dhow ee baarlamaankan uu shaqeynayey.
“Waxaa sannadkan ina horyaalla hawlo culus oo doorashadu ay ka mid tahay. Waxaan horay iskula garaney inaanay dalka ka qabsoomi karin doorasho qof iyo cod ah. Waxaase jira nidaam kale oo aan ku heshiinay oo ah doorasho dadban. Baarlamaanka ayaan horkeenaynaa nidaamkaas si sharciyad loogu sameeyo. Mabda’a aan ku shaqeyneyno waxaa uu ku saleysan yahay in aan qabsano waxa aan maanta awoodno, isla markaana aan sharciyad u sameyno waxa aan qabaneyno inagoo wadajirna oo is oggol’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa intaa raaciyay inuu rajo badan ka qabo in Soomaaliya ay horay ugu sii dhaqaaqi doonto haddii la joogteeyo hannaanka wax isla oggolaanshaha ee haatan goleyaasha qaranka ay ku shaqeynayaan.
“Sidaad wada og tihiin waxaan ku guda jirnaan hannaanka dhismaha dowladnimada Soomaaliya, burburki nagu dhacay kadib. Waxaan Baarlamaanka ka codsanayaa inay waqti badan, juhdi badan iyo dulqaadba geliyaan hawlaha horyaalla kalfadhigan 8-aad ee xasaasiga ah. Waxaa mar dhow la idin soo gudbin doonaa natiijada ka soo baxda kulamada haatan Muqdisho inooga socda ee ku saabsan doorashooyinka. Waajibaadkiina inaad ka gudataan ayaan idin ka fadhinaa , idinkoo weliba eegaya duruufaha adag iyo marxaladda aan mareyno. Wixii aad u aragtaan inay sax tahay inaad nagu waafaqi doontaan ayaan filayaa, wixii aad u aragtaan inaan dib u wada saxnana diyaar baan idin nahay’’.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in Baarlamaankan 9-aad ee Soomaaliya uu yahay kii ugu wanaagsanaa marka loo eego baarlamaanadii waddanka soo marey intii lagu guda jiray hannaanka dib u dhiska qaranimada Soomaaliya ee soo bilowday sannadkii 2000.
Madaxweynaha ka hor waxaa isna halkaasi khudbad ku saabsan waxqabadkii baarlamaanka iyo hawlaha horyaalla ka jeediyay Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka, Mudane Maxamed Cusmaan Jawaari.
Guddoomiye Jawaari ayaa si qota dheer uga hadley qorshaha doorashada 2016-ka, dib u eegista dastuurka, dhismaha hay’adaha dowliga iyo xoojinta adeegga garsoorka.
Waxaa uu Guddoomiyaha Baarlamaanka ugu dambeyn sheegay in baarlamaanka uu xil iska saari doono hawlaha adag ee horyaalla ee muhiimka u ah mustaqbalka siyaasadeed ee dalka.
More Stories From SomaliHAILEMARAIM OO DAREEN ISKU-DHAF AH KA MUUJIYEY 20-KA GINBOTDaawo-Bur-Burkii Diyaarada Masar oo la helayVIDEO:Xubnihii Golaha Amaanka oo ka warbixiyay kulamadii ay la qaateen madaxda Somalia	About admin	Avatars by Sterling Adventures